Daabacida Jinka 'Shenzhen Fumax Technology Co., Ltd.
Guriga Fumax SMT wuxuu leeyahay mashiin daabacan oo si toos ah u dhejinaya alwaax si uu ugu tufto xinka alxanka daaqadaha.
xakamaynta adag ee daabacaadda Jinka Alxan
Daabacaadda dhejiska dhejiska guud ahaan waxay ka kooban tahay saxan dhejis, dhejis alxan ah, daabacan, iyo wareejinta guddiga wareegga.
Mabda 'ahaan shaqeynaya ayaa ah: hagaaji guddiga wareegga si loogu daabaco miiska meelaynta daabacaadda, ka dibna u isticmaal xoqadaha daabacadda si aad ugu daabacdo shaashadda alxanka ama xabagta casaanka ah ee ku xirma suufka u dhigma iyada oo loo marayo stencil. Saldhigga wareejintu wuxuu ku darsamayaa mashiinka meelaynta si otomaatig ah loogu meeleeyo.
1. Waa maxay Printer Jinka Alxan? Iyo sidee u shaqeysaa?
Daabacaadda Jinka Alxan ee guddiga wareegga ka dibna isku xira qaybaha elektarooniga ah ee guddiga wareegga iyada oo loo marayo dib-u-celinta ayaa ah habka ugu badan ee loo isticmaalo warshadaha elektarooniga maanta. Daabacaadda Jinka Alxanku waa xoogaa sidii rinjiyeynta derbiga. Farqiga u dhexeeya ayaa ah in si loogu dhejiyo koollada alxanku meel cayiman isla markaana loo xakameeyo xaddiga dhejiska sifiican loo saxo, saxan bir gaar ah oo sax ah (stencil) waa in la adeegsadaa. Xakamee daabacaadda koollada Alxan. Ka dib marka la soo daabaco Jinka Alxan, Alxan ku dhajiska halkan ayaa loogu talagalay qaab "田" si looga hortago in Jinka Alxanku aad ugu uruuro bartamaha ka dib markii uu dhalaalayo.
2. Halabuurka daabacadda Jinka Alxan
（1 System Nidaamka Gaadiidka
（2 system Nidaamka meeleynta shaashadda
（3 system Nidaamka meeleynta PCB
（4 system Nidaamka muuqaalka
（5 system Nidaamka wax xoqa
（6 device Qalabka nadiifinta shaashadda otomaatiga ah
（7 table Miis daabacan oo la hagaajin karo
3. Shaqada daabacadda Jinka Alxan
Daabacaadda Jinka Mashiinka ayaa aasaas u ah tayada alxanka sabuuradda ku xardhan, booska uu ku jiro koollada wax lagu iibiyo iyo xaddiga daasaddu waa muhiim. Badanaa waxaa la arkaa in koollada alxanku si fiican loo daabicin, taas oo keenaysa in alxanka gaagaaban oo alxanna faaruq noqdo.